Bit By Bit - Mass iskaashi - 5.5.2 heterogeneity Kabaalaynta
Marka aad ku howl-gasha dad badan in ay ka shaqeeyaan dhibaato dhab ah cilmiyeed, waxaad ogaan doontaa in ay ka qaybgalayaashu waxay noqon doonaan Nuurre Aw laba siyaabood oo muhiim ah: waxay ku kala duwan yihiin in ay xirfad iyo waxay kala duwanaan doontaa in ay heer ka ah dadaal. dareen-celin hore ee cilmi badan oo bulshada waa in laga saaro ka qaybgalayaasha tayo hooseeyo, ka dibna isku dayo in la ururiyo qadar go'an oo warbixin ka soo qof walba ka tageen. Tani waa qalad aad ku qorshayso mashruuc iskaashi mass ah.
First, ma jirto sabab in laga saaro ka qaybgalayaasha xirfad yar yahay. In wicitaanada furan, ka qaybgalayaasha xirfad hooseeyo dhibaato lahayn, kaalintii ay ka ma yeelin qof oo iyagu ma ay u baahan yihiin waqti kasta si ay u qiimeeyaan. In xisaabinta aadanaha iyo mashaariicda qaybiyey xog ururinta, ayaa dhanka kale, foomka ugu wanaagsan ee tayada yimaado iyada oo shaqo, oo aan bar sare oo ka qaybqaadashada. Dhab ahaantii, halkii laga reebo ka qaybgalayaasha xirfad yar yahay, hab ka wanaagsan yahay si ay u caawiyaan iyaga ka dhigi darsaday fiican, inta cilmi ee eBird ku sameeyeen.
Second, ma jirto sabab ay u ururiyaan qadar go'an oo warbixin ka qaybgale kasta. Ka qayb qaadashada mashaariicda badan iskaashi mass waa cajiib qummanaynu (Sauermann and Franzoni 2015) iyadoo tiro yar oo ah dadka ka qeyb a badan-mararka qaarkood loo yaqaan madaxa baruurta kolba dad badan oo ah qayb yar oo mararka qaarkood loogu yeero dabada dheer. Haddii aadan u ururiyaan macluumaad ka madaxa baruurta iyo dabada dheer, aad ka tageeyso tan oo warbixin soo guro. Tusaale ahaan, haddii Wikipedia aqbalin 10 iyo 10 oo kaliya itusi per editor, waa lumin lahaa oo ku saabsan 95% of itusi (Salganik and Levy 2015) . Sidaas darteed, la mashaariicda iskaashiga mass, waxaa fiican inaad uga faa'iidaysato heterogeneity halkii ay isku dayaan in ay tirtiraan.